သင်တန်းသား ကာလ အချိန်တိုတိုနဲ့ ပွဲထွက်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ K-pop Idol များ
Posted on - Mar 24 
လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ K-pop Idol တွေဟာ Idol တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ကို နှစ်အတော်ကြာ Training ဆင်းခဲ့ကြရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် Training ဆင်းနေရတဲ့ အချိန်တွေဆိုတာဟာ တကယ်ကို စိတ်ရော၊ လူရော ပင်ပန်းခက်ခဲရတဲ့ အချိန်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးမယ့် Idol (၉) ယောက်ကတော့ Training ကာလကို ၁ နှစ်ပြည့်အောင်တောင် မယူလိုက်ရပဲ ပွဲထွက်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ရှုစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
EXO ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Baekhyun ကတော့ Training ၃ လမျှသာယူပြီး ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
. EXO’s Chen
EXO ရဲ့ နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Chen ရဲ့ Training ကာလကတော့ ၄ လမျှသာ ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Miss A ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေသူ Suzy ကတော့ Idol တစ်ယောက်အဖြစ် ပွဲထွက်နိုင်ဖို့အတွက် ၁၀ လမျှအချိန်ယူပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်.
KARA ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ တစ်ကိုယ်တော် လှုပ်ရှားနေတဲ့ Goo Hara ရဲ့ Training ကာလကတော့ ၃ လပဲ ကြာမြင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Super Junior ရဲ့ နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kyuhyun ကတော့ Training ကာလ ၃ လမျှတာ အချိန်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့ရပြီးနောက် Super Junior အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။